အခွားသောအော်တိုဆောင်ပုဒ် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဆိုပါကားကိုအိမ်မှာလိဗနာဖူးအငုံထွက်နှင့်အရင်ဆေး? အဆိုပါစက်နှင့်အတူလိဗနာဘူးသီး၏ခြေရာတွေကို clean up?
ဆောင်းရာသီသည်ပြproblemsနာများနှင့်အတူလမ်းများပေါ်မှတဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းလာသည့်ဓါတ်ကူပစ္စည်းများနှင့်အဆုံးသတ်သည်နှင့်မော်တော်ကားသမားများသည်သက်သာရာသက်ပြင်း ချ၍ ရှူရှိုက်မိသောအခါမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးနက်သောပြproblemနာပေါ်လာသည်။ ဤရွေ့ကားပေါ့ပ ...
ကျွန်မကားကိုဘယ်လိုစတင်သလဲဘက်ထရီထိုင်? ဘက်ထရီထိုင်လျက်မူလျှင်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကားကိုရဖို့ဘယ်လို
ဘက်ထရီပျက်ကွက်သည့်အခြေအနေသည်မည်သည့်ကားပိုင်ရှင်နှင့်မရင်းနှီးသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ၊ ဒီဟာကအရေးမကြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်ပြီးအရမ်းပြင်းထန်တဲ့ပြwithနာတွေနဲ့ခြိမ်းခြောက်နေတယ်။ မြို့ပြအခြေအနေများရှိပါကဘက်ထရီကိုနောက်ကျစေမည်ဟုခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။
Pickup "Chevrolet ကား": အကွာအဝေး
သို့သော်ပစ်ကပ်ကားများမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အမေရိကသည်သူတို့၏ဇာတိမြေဖြစ်သည်။ ကား၏သမိုင်းကိုမယုံနိုင်စရာအတွေးဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ "Chevrolet" ကုမ္ပဏီ၏ developer များ (ထိုပစ်ကပ်ကကျော်ကြားခဲ့သည် ...
Lada Kalina ဘူတာမှလှည်းနှင့် Hatchback - နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ "Lada Kalina 2" - မျိုးဆက်သစ်ကားတစ်စီး
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် AvtoVAZ သည်မော်တော်ကားသမားများအားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်နှစ်သက်သည်။ ၎င်းတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာအားလုံးနီးပါးတိုးတက်ခဲ့သည်။ Lada Kalina 2013 သည်ရှေ့ဘီးကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောထိုင်ခုံအနေအထားနှင့်ကြီးမားသောအတွင်းပိုင်းဖြစ်သည်။
200000 များအတွက်ကားအဘယျသို့သောဝယ်ဖို့? ရုရှား၌ကားတစ်စီးဝယ်ရန်: စျေးနှုန်းများ, ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကို, ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ
ဒီတော့ဘယ်ကားကိုဝယ်သင့်လဲ။ တကယ်တော့လက်တွေ့မကျတဲ့ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်စရာအရေအတွက်သာရှိပါတယ်။ သူတို့ပြောသကဲ့သို့ - အရသာနှင့်အရောင်တိုင်းသည်။ ဂျာမန်၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန် - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ...
ကိုထိပုတ်ပါအပူပေးစက် VAZ-2114 ကိုယ်လက်အစားထိုး
VAZ-2114 ကားများရှိအပူပေးစက်သည်အအေးစနစ်၏အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမကြာခဏဖြိုဖျက်သောကြောင့်ကားပိုင်ရှင်တွေ, အတွေ့အကြုံရပြီးလျှင်, ပြောင်းလဲပစ်ရန် ...
မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤကိရိယာများသည်သီးခြားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းများမှဖြတ်သန်းသွားသည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဤဒီဇိုင်းများကအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးမိသူအနည်းငယ်မျှရှိသည်။
တစ်ဦး crossover (ကား) ကဘာလဲ? SUVs နဲ့ crossover
SUVs နှင့် crossovers များသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောမော်တော်ယာဉ်များဖြစ်သည်။ မြို့ထဲမှာရောလူနေအိမ်ခြေပြင်ပမှာပါ၊ သူတို့ဟာမင်းရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါ။ crossover (ကား) ဆိုတာဘာလဲ Crossover အသစ်ဟာ ...
Backhoe Loader ကို JCB 3CX စူပါ: သတ်မှတ်ချက်များ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ညွှန်ကြားချက်
ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ JCB သည်အရည်အသွေးမြင့်ခြေရာခံဘီးတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လူသိများသည်။ Backhoe loader များသည်ကုမ္ပဏီ၏ဌါနတွင်အထူးနေရာယူထားသည်။ ဒီနည်းပညာ၏အကျော်ကြားဆုံးမော်ဒယ်များထဲကတစ်ခု ...
"Lada 2170" ("Priora"): အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊
Lada Priora-2170 သည် AvtoVAZ မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် sedan အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ Hatchback သည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသို့စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဘူတာရုံကိုလှည်းဖြင့်စီးခဲ့သည်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာ ...
KamAZ-65115: နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, ဖော်ပြချက်ဓာတ်ပုံ
KamAZ-65115 ကိုအောက်ဖော်ပြပါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအား ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထရပ်ကားကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ရောင်းဝယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စီးရီးအမှိုက်ပုံထရပ်ကားတစ်စီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကားနောက်ခန်းမှ တင်၍ ချထားသည်။
ကားတစ်စီးပေါ်မှာအဘယ်ကြောင့်လျှက်ရှိကြောင်းဗီနိုင်း? ကားပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်ကော်လုပ်နည်း။ ဘယ်ဗီနိုင်းရုပ်ရှင်ဝယ် firms
ယနေ့မော်တော်ယာဉ်ပုံစံကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးကားမှာဗီနိုင်းဖလင်ဖြင့်ကားတစ်ထည်ကိုခင်းသည်။ ဒီပစ္စည်းအများအပြားထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဌန်သည်အလွန်ကြီးသောကြောင့်မှန်ကန်သောရွေးချယ်ဖို့ ...
နာယက Taker 250: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သတ်မှတ်ချက်များ, ဓါတ်ပုံများအများဆုံးမြန်နှုန်း
Patron Taker 250 မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည်လှည့်စားတတ်သောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအရ၎င်းသည်ဂျပန်လူမျိုးအချို့၏ပုံစံဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ရပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူရော၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပျော်တမ်းတွေပါ ... ချက်ချင်းဆိုသလို ...
ဆီပြောင်းတဲ့အခါအင်ဂျင်ဖြည့်ဖို့လိုပါသလား? များစွာသော autororums များတွင်သင်ဤကိစ္စ၏အပူဆွေးနွေးမှုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ခံသူများသည်ရာနှုန်းပြည့်ယုံကြည်မှုရှိပြီး၎င်းတို့သည်မှန်ကန်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီး ...
"Lada Granta" sedan: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပိုင်ရှင်သုံးသပ်ချက်များ
“ Lada Granta” (sedan) သည် Volga Automobile Plant မှတီထွင်ခဲ့သောဘတ်ဂျက်ရှေ့ဘီးယက်ကား၏အမည်ဖြစ်သည်။ Lada Kalina မော်ဒယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်ယူသည်။ စီးရီးထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ...
အင်ဂျင်ပါဝါကရေနံ: ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ, ရှေးခယျြမှု, သိုလှောင်မှု
မည်သည့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မဆို၊ ပို၍ ပင်အစပြုသူတစ် ဦး ကသူ့ကားအတွက်မည်သည့်အင်ဂျင်ဆီကိုရွေးရန်၊ သက်တမ်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အခြားညွန်ကိန်းများကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ...
ကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ရှင်၏ပထမအဆင့်တွင်ပိုင်ရှင်သည်လမ်းအခြေအနေပေါ်တွင်အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ကား၏အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုနားလည်လာသည်။ ကားပြိုကွဲမှုကိုမိမိကိုယ်မိမိရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကားတစ်စီးပေါ်ရှိ ၀ င်းဒိုးထိန်းညှိခလုတ်သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါကဤကားကိုမောင်းနှင်ခြင်းသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အအေးသို့မဟုတ်ပိတ်ထားသောနွေရာသီအပူရှိန်တွင်ပွင့်နေသည့်ပြတင်းပေါက် - ဤအရာသည်ရှင်းနေပါသည်
Chevrolet-Niva, အခန်းစစ်ထုတ်: အစားထိုး။ GM-AvtoVAZ မှထုတ်လုပ်သော Chevrolet Niva
Niva Chevrolet ကားသည် AvtoVAZ မှထုတ်လုပ်သောပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်ရုံမှ cabin filter ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဒြပ်စင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ, မျိုးကွဲများနှင့်အစားထိုးအကြောင်း - ပို ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 68 Next ကို 's Page
72 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 5,836 စက္ကန့်ကျော် Generate ။